Harvard University - Study in USA. Waxbarashada Abroad Magazine
aasaasay : 1636
Ha iloobin in aad wada hadlaan Jaamacadda Harvard
Qor Jaamacadda Harvard
Jaamacadda Harvard waa hay'ad gaar ah oo la asaasay 1636.
Fiiga waxbaridda ee Jaamacadda Harvard waa $46,000 (Aprox.).
Harvard waxa uu ku yaalaa Cambridge, Massachusetts, kaliya ka baxsan Boston. Nidaamka Maktabadda ballaaran Harvard ee ku yaala ururinta ugu da'da weyn ee dalka Mareykanka iyo ururinta ugu weyn ee gaarka loo leeyahay ee dunida. Waxaa jira in ka badan in ay dugsiga ka badan la galinin lahayn, in kastoo: kooxaha isboortiga Harvard ee tartamaan Ivy League, oo xilli kasta kubada cagta dhammaanaysaa “Ciyaarta,” kala gurteen sanadlaha ah ee u dhexeeya kooxda ay xafiiltamaan sheekooyin Harvard iyo Yale. At Harvard, on-campus guryaha la deggan yahay waa qayb muhiim ah oo nolosha ardayga. Ardayda ku nool agagaarka Yard Harvard ee xarunta of campus, ka dib markii ay kaalinta in mid ka mid ah 12 guryaha undergraduate ay saddex sano ka hartay. Inkasta oo ay mar dambe loo aqoonsaday by jaamacadda sida kooxaha rasmiga ah ardayga, sideedii dhan-lab “kooxaha finalka” adeegi ururada sida bulshada qaar ka mid ah ardayda undergraduate; Harvard kale oo uu leeyahay shan kooxood dhaddig.
Waxa intaa dheer in College ee, Harvard wuxuu ka kooban yahay 13 dugsiyada kale iyo machadyada, oo ay ku jiraan top-kaalinta Business School iyo Dugsiga Caafimaadka iyo Waxbarashada Dugsiga Graduate aadka kaalinta, School of Engineering iyo Applied Sciences, Law School iyo John F. Kennedy School of Dowladda. Siddeed laga xoreeyo. madaxweyne ka qalin Harvard College, oo ay ku jiraan Franklin Delano Roosevelt iyo John F. Kennedy. Qalinjabiyeyaasha kale xusid mudan waxaa ka mid ah Henry David Thoreau, Helen Keller, Yo-Yo Ma iyo Tommy Lee Jones. In 1977, Harvard heshiis la machadka walaashiis Radcliffe College saxiixay, iyaga midaynta in iskaashi waxbarasho adeegaya ardayda lab iyo dhaddig, inkastoo iyagu ma ay si rasmi ah ku milmaan ilaa 1999. Harvard sidoo kale leeyahay hibeynta ugu weyn ee dugsi kasta oo adduunka ah.
Jaamacadda Harvard u hibeeyeen ilaa ay heer sare walbaba, waxbarashada, iyo cilmi baaris, iyo horumarinta madaxda nidaamo badan oo kala ah mid caalami ah. Jaamacadda, taas oo ku salaysan yahay in Cambridge iyo Boston, Massachusetts, leeyahay diiwaan gelinta ee ka badan 20,000 musharax degree, oo ay ku jiraan undergraduate, graduate, iyo ardayda xirfadeed. Harvard leedahay in ka badan 360,000 Qalinjabiyeyaasha ku nool dunida ee.
Harvard lagu yaqaan hoggaanka caalamiga ah ee waxbarashada, iyo macalimiinta Harvard waxa ay ka kooban rag iyo dumar kuwaas oo culimada-heer caalami ah. xubnaha Kuliyada yihiin shakhsiyaad dareen iyo cajiib ah, kuwaas oo ay sii wadaan cilmi-baarista gaar ah halka barayay at Harvard. Waxay ka guud ahaan dalka oo dhan ka badan dunida iman, iyaga la keeno Xoolo kala duwan ee aqoonta.
Ku dhowaad dhammaan koorsooyinka Harvard College waxaa loogu talagalay, baray oo uu dusha by awood Harvard, iyo dhammaan macalimiinta FÁS waxaa looga baahan yahay inay dadka baraan oo qayb ka ah waajibaadkooda. Kulliyaddu waa heer sare ah loo heli karo, iyo Fasalo Harvard College yihiin celcelis ahaan hoos 40, iyadoo in ka badan kala bar koorsooyinka la bixiyo semester kasta qoraya 10 ama ardayda ka yar. Tani waxay u ogolaaneysaa for xiriir arday-professor dhow iyo gacan ka geysaneysaa in dareenka beesha on campus. Macalimiinta sidoo kale isu heli karaan ardayda ka baxsan fasalka, xitaa ka baxsan saacadaha shaqada, sida kulan hoolka cuntada ama ka hor ama ka dib fasalka. Kulliyaddu at Harvard dhigi dhibic ka mid ah xirta ardayda si ay u abuuraan waayo aragnimo waxbarasho oo lagu qanco. badan oo ku saabsan University ay ka go'antahay in Development Kulliyadda iyo dadyowga kala duwan Baro.
Division of Education Sii
Harvard School of Medicine Ilkaha
Harvard School Ilaahnimada
Kuliyada Arts & Sciences
Harvard John A. Paulson School of Engineering iyo Applied Sciences
Radcliffe Institute for Study Advanced
Harvard waa hay'adda ugu da'da weyn ee waxbarashada sare ee dalka Mareykanka, asaasay 1636 cod Maxkamadda Great iyo Guud ee Massachusetts Bay Colony ah. Waxaa la magacaabay ka dib markii ugu horeysay ee ka sokay College ee, Wasiirka dhallinyarada John Harvard ee Charlestown, kuwaas oo uu ku dhintay 1638 uu maktabadda iyo guryaha badhkood ayaa tegey inay hay'adda. taalada A of John Harvard taagan maanta horteeda University Hall ee Harvard Yard, oo laga yaabaa inay tahay durkin University ee wanaagsan ee loo yaqaan.
Jaamacadda Harvard waxay leedahay 12 degree-bixinta Dugsiyada lagu daro Institute Radcliffe ee Study Advanced. University ayaa koray ka sagaal ardayda Masterka hal in diiwaan gelinta ee ka badan 20,000 musharax oo ay ku jiraan degree undergraduate, graduate, iyo ardayda xirfadeed. Waxaa jira in ka badan 360,000 Qalinjabiyeyaasha ku nool laga xoreeyo dalka ah. iyo in ka badan 190 dalalka kale.
The Harvard University Archives yihiin hayo by nidaamka Maktabadda Jaamacadda Harvard iyo waa khayraadka weyn si ay u helaan xogta taariikhiga ah ee Harvard.
On Sept. 8, 1836, at xaflad Bicentennial Harvard ee, waxa lagu dhawaaqay in Madaxweynaha Yoosiyaah Quincy helay sawir ugu horeysay u xoqdo ee gacmaha College - gaashaan oo hal ku dhiga ah Latin "VERITAS" ("Run" ama "xaqa") on saddex buugaag - halka cilmi baarista uu History of University Harvard ee Archives College. Inta lagu guda jiro Bicentennial ah, banner cad sareeysa teendho weyn ee Yard ee si cad u soo bandhigay design this markii ugu horeysay.
Ilaa daahfurka Quincy ayaa, sawir-gacmeed ah (diiwaanka shirka ah dira on Jan. 6, 1644) la soo gudbiyay iyo illoobi. Waxa uu noqday ku saleysan shaabaddii si rasmi ah ay qaateen Corporation ee 1843 oo weli wargelinaysaa version maanta loo isticmaalo.
Casaanka waxaa si rasmi ah loogu tala galay sida midabka Harvard ee cod ahaa Corporation Harvard ee 1910. Laakiin sababta casaanka? Laba ka mid ah seebab, Charles W. Eliot, Class of 1853, iyo reer Benyaamiin W. Crowninshield, Class of 1858, siiyaa cimaamado casaanka in kooxdiisa ay si daawadayaal kala xulkiisii ​​markabka Harvard ee ka kooxaha kale inta lagu guda jiro regatta ah 1858. Eliot noqday Madaxweynihii 21-aad ee Harvard 1869 oo waxay u adeegeen ilaa 1909; cod Corporation si uu u sameeyo midabka ah ee bandannas Eliot ee midabka rasmiga ah ugu dhakhsaha badan u yimid ka dib markii uu iska casilay.
Laakiin ka hor inta codka rasmiga ah by Corporation Harvard ah, midabka ardayda doorashada lahaa at hal dhibic Idamkiisa dhexeeya casaanka iyo magenta - badan tahay maxaa yeelay fikradda ah la isticmaalayo midabada si ay u matalaan jaamacadaha weli cusub ee qaybtii dambe ee qarnigii 19aad. Riixay by dood caan ah si ay go'aan uga, undergraduate Harvard qabtay in lasameeyo on May 6, 1875, on midabka University ee, iyo casaan ku guuleystay by margin ballaaran. Wargeyska Ardayga - taasoo lagu soo yeedhay Magenta The - magaceeda bedelay leh arrinta aad soo socda.
Ka dib markii Continental Army George Washington ayaa lagu qasbay British ah inuu ka tago Boston ee March 1776, Harvard Corporation iyo beldaajiyayaal codeeyay on April 3, 1776, si ay wada tashi shahaado sharaf ku dul guud, yaa u aqbalay in maalinta aad (laga yaabaa in uu xarunta Cambridge ee Craigie House). Washington xiga booqday Harvard ee 1789, sida laga xoreeyo dalka ugu horeysay. Madaxweynaha.
kale ee laga xoreeyo. Madaxweynayaasha si aad u hesho shahaado sharaf ka mid ah:
1929 Franklin Roosevelt Delano
Ma rabtaa wada hadlaan Jaamacadda Harvard ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
Photos: Harvard University rasmiga ah Facebook
dib u eegista Jaamacadda Harvard
Ku biir si ay ugala hadlaan of University Harvard.
University of Wisconsin Madison- Madison